Temporal range: Pleistocene ကာလ မှ လက်ရှိခေတ်
O. rosmarus laptevi (အငြင်းပွားဆဲ)
Phoca rosmarus လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၅၈
Trichechus rosmarus လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၆၆
မြောက်ဘက် ပင်လယ်ဒေသများတွင်နေထိုင်သော ဝါးလရပ်ဖျံကြီးမျိုး (အင်္ဂလိပ်: Walruses) သည် နို့တိုက်သတ္တဝါအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သည်။ သူတို့အရေပြားအောက်တွင် ထူထဲသော အဆီပြင်က သူတို့ကို အေးခဲမှုဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးထားသည်။ ဝါးလရပ်ဖျံများတွင် ရှည်လျားသောသွားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ ဝါးလရပ်ဖျံများသည် ရေထဲတွင် အစာရှာစားကြသည်။ ပင်လယ်အောက်ကြမ်းပြင်တွေမှာ တွေ့ရှိရသော ယောက်သွားကောင်တွေကို စားသောက်လေ့ရှိသည်။
↑ Lowry L (2016). "Odobenus rosmarus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T15106A45228501.en. Database entry includesabrief justification of why this species is considered Vulnerable
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါးလရပ်ဖျံ&oldid=714835" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။